बिज्ञान-प्रविधि | A News Portal of Special News In Depth Form Kathmandu Nepal…डिजिटल जमानाको इ-पत्रिका !
इन्टरनेट नचलेपछि तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ
Posted By: Birendra Rajon: February 17, 2017In: बिज्ञान-प्रविधिNo Comments सोलुखुम्बु, ६ फागुन । गाउँमा इन्टरनेट नचलेपछि भूकम्पपीडितको तथ्याङ्क सङ्कलनमा खटेका प्राविधिक सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका छन् । भूकम्पपीडितको लगत सङ्कलनका लागि विभिन्न गाविसमा खटिएका...	Read more Share
Posted By: Birendra Rajon: February 15, 2017In: बिज्ञान-प्रविधि, मुख्य समाचारNo Comments काठमाडौं । विश्वको चौथो ठूलो मोवाइल ब्राण्ड दाबी गरेको ओप्पो मोबाइल नेपाली बजारमा धुमधामका साथ भित्रिए सँगै उपभोक्ताहरुको गुनासो पनि उत्तिकै आएको छ । एक कार्यक्रमका समारोह बीच ओप्प...	Read more Share
Posted By: Birendra Rajon: February 15, 2017In: बिज्ञान-प्रविधिNo Comments काठमाडौं । एनसेलले मोबाइलबाट फेसबुक चलाउने आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा दिने भएको छ । इन्टरनेट सबैका लागु थिम अन्तर्गत एनसेलले फेसबुकसँगको सहकार्यमा मंगलबार फेसबुक फ्री सार्वजनिक...	Read more Share
Posted By: Birendra Rajon: February 06, 2017In: बिज्ञान-प्रविधि, मुख्य समाचारNo Comments काठमाडौं, माघ २३ । इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अध्यणरत बिद्यार्थीहरुले सोलारबाट चल्ने कार बनाएका छन । सोलार कार पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पोखराका ८ जना बिद्यार्थीहरुको समूहले नि...	Read more Share
Posted By: Birendra Rajon: February 06, 2017In: बिज्ञान-प्रविधि, मुख्य समाचारNo Comments काठमाडौं, माघ २४ । कक्षा १२ मा विज्ञान विषय लिएर अध्ययन गरिरहेका ५ जना बिद्यार्थीले आकासबाट मल, बिउ, तथा बिषाधी छर्न मिल्ने ड्रोन बनाएका छन् । प्रमोद अधिकारी, प्रभाकर पाण्डे, एन्ज...	Read more Share
Posted By: Udhav Tamangon: January 27, 2017In: बिज्ञान-प्रविधिNo Comments काठमाडौं । विश्व बजारमा मात्र हैन, नेपाली बजारमा पनि मोबाइल एप्सको विकासक्रम बढ्दो छ। गुगलको प्लेस्टोरमा नेपालीले बनाएका एप्सहरू पनि थुप्रै छन् र ती डाउनलोड हुने संख्या पनि उल्लेख्...	Read more Share
‘सप्टवेयर ह्याक’: जिओनी मोवाइल प्रयोगकर्ताहरु सावधान !
Posted By: Birendra Rajon: January 27, 2017In: बिज्ञान-प्रविधि, मुख्य समाचारNo Comments काठमाण्डौ, १४ माघ । स्मार्ट मोवाइलहरु मध्ये ब्यट्री निकै टिक्ने मोवाइलको रुपमा चिनएिका जिओनी मोवालधनीहरुलाई अब समस्या भएको छ । हिजोराती अचानक उक्त मोवाइलको सर्वर सप्टवेयर ह्याक हुद...	Read more Share
मोवाइल फोन ह्याङ्ग भयो ? यसो गर्नुस्
Posted By: Birendra Rajon: January 25, 2017In: बिज्ञान-प्रविधिNo Comments स्मार्टफोन स्लो हुने र ह्याङ हुने समस्याबाट धेरै प्रयोगकर्ताहरु पीडित हुन्छन् । यस्तो समस्या उत्पन्न हुँदा धेरै प्रयोगकर्ताहरुले फोन अफ र अन गर्ने गर्छन् भने कोही सर्भिस सेन्टर पुग...	Read more Share
कुन-कुन मोबाइलमा चल्छ 4G इन्टरेनट ? (सूचीसहित)
Posted By: Birendra Rajon: January 01, 2017In: बिज्ञान-प्रविधि, मुख्य समाचारNo Comments काठमाडौं, १७ पुस । तीब्र गतिको मोबाइल इन्टरेनट ‘फोर-जी’ नेपालमा पनि सुरु भएको छ । नेपाल टेलिकमले आजदेखि काठमाडौं र पोखराका जिएसएम पोष्टपेड प्रयोगकर्ताका लागि फोर-जी सेवा थालेको छ ।...	Read more Share
नेपाल टेलिकमको ‘फोर जी’ सेवा सुरु
Posted By: Birendra Rajon: January 01, 2017In: बिज्ञान-प्रविधि, मुख्य समाचारNo Comments काठमाडौं, १७ पुस २०७३ । नेपाल टेलिकमले आइतबारबाट ‘फोर जी’ सेवा सुरु गरेको छ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच फोर जी सेवाको शुभारम्भ...	Read more Share